Kobo Libra H2O, ny mpamaky eReaders rehetra izay vakinao amin'ny alehanao rehetra | Vaovao momba ny gadget
Kobo Libra H2O, ilay eReader rehetra izay vakinao amin'ny alehanao rehetra
Andao hiverina ity taona 2006, taona nanaovan'izy ireo fisehoan'ny mpamaky eReaders voalohany, ireo fitaovana izay azontsika atao mamaky boky an'arivony sy an'arivony na aiza na aiza miaraka amin'ny fitaovana iray. Ary ny fikolokoloana teknolojia eo amin'ny tontolon'ny famakiana dia ilaina taorian'ny nahitantsika ny tetezamita iray ihany teo amin'ny tsena mozika sy horonan-tsary miaraka amin'ireo fitaovana mamela antsika handany atiny nomerika. Sony dia iray amin'ireo voalohany nitsambikina tamin'ny kalesy, saingy tsy ela dia nanomboka nahita ny marika rehetra manaraka azy izahay.
Ny ranomainty elektronika dia nipetraka teto, ranomainty nahafahanay namaky teny nefa tsy leo ny masonay ary namela fizaran-tena lehibe ho an'ny fitaovana. Ary marina izao no tianay hitondra anao ny Kobo vaovao, ny vaovao Kobo Libra H2O eReader. Fitaovana vaovao avy amin'ny tranombokin'ny Rakuten Japoney izay miaraka aminy Afaka mamaky izay alehantsika rehetra isika nefa tsy matahotra fa ho lena ny fitaovana. Efa nanandrana izahay ary efa nilaza taminay fa tena mendrika izany. Aorian'ny fitsambikinana dia omenay anao ny antsipiriany rehetra ...
1 Kobo Libra H2O, ilay eReader tsy tantera-drano izay mamerina ny bokotra ara-batana
2 Mandrosoa mamaky ny boky nefa tsy very ny kofehy iraisana
3 White, ny loko lamaody ho an'ny eReaders
4 Boky na lahatsoratra tianao indrindra dia misaotra an'i Pocket
5 Kobo, tranomboky virtoaly izay avy amin'ny tontolon'ny vatana
6 Vidio ny Kobo Libra H2O vaovao
Kobo Libra H2O, ilay eReader tsy tantera-drano izay mamerina ny bokotra ara-batana
Ny Kobo Libra H2O dia manana fahafaha-mitahiry boky hatramin'ny 6000, miankina amin'ny haben'ireto, miankina amin'ny habetsaky ny habeny, miankina amin'ny habeny fanadihadiana izay manamafy fa afaka manao izany izahay vakio amin'ny fiainantsika eo ho eo anelanelan'ny boky 2000 sy 4000 amin'ny fiainantsika manontolo.
Ireo bandy ao Kobo dia nila nampitombo ny efijery an'ny Kobo Aura H2O, ary manana izy ireo. Ny Kobo Libra H2O dia miaraka a Efijery 7 inch, efijery tonga lafatra hamakiana ireo ebook rehetra tadiavinay. Ary araka ny lazainay aminao dia tsy len-drano. Ok, tsy ilaina ny miditra anaty pisinina hamakiana, fa ny tena marina dia ny fiarovana amin'ny rano dia tena mahaliana amin'ny tontolo iainana ahafahan'ny fitaovana mando. Azoko atao ny mieritreritra fotoana izay mamaky eny ivelany sy mamaky ranonorana ary manomboka milatsaka ny orana sasany, na raha eo amin'ny manodidina ny pisinina na amoron-dranomasina isika.
Ny fiovana dia miova raha oharina amin'ny Kobo Aura H2O, ary mitondra a endrika mitovy amin'ny Kobo Forma, eReader mitarika ny orinasa. Na dia marina aza fa tsy manana endrika tsy misy rafitra izy io, ny Kobo Libra H2O, dia mitondra ny bokotra ara-batana mitovy amin'ilay Kobo Forma ahafahantsika mamadika ny pejy, na miverina amin'ilay teo aloha, tamin'ny fomba mora kokoa noho ny mikasika ny efijery mikasika (manohitra ny taratra ary miaraka amin'ny famahana 300 PPI) an'ilay fitaovana. Ity dia zavatra tiako be dia be hatramin'ny nanandramana eReaders hafa dia zavatra tsy hitako noho ny fahasarotan'ireo efijery mikasika. Sarimihetsika iray izay manana an hazavana eo aloha azo ovaina ary manana tonony sepia aza ka ny masontsika tsy reraka amin'ny tontolo maivana.
Mandrosoa mamaky ny boky nefa tsy very ny kofehy iraisana
La Ny Device UX, ilay rindrambaiko andehanany, dia tsara, raha tsy misy tsara dia marina fa afaka manatsara hatrany ianao. Ny famindrana ny fitaovana dia mihodina ny efijery, zavatra tena mahaliana na dia izany aza I Kobo dia mila manosotra ny valiny omena kely. Toy izany koa no mitranga amin'ny fifangaroan'ny menus, mandeha tsara izy io saingy mieritreritra aho fa amin'ny fanavaozana ny firmware dia hihatsara izy io.
Iray amin'ireo zava-baovao amin'ity Kobo Libra H2O dia fomba vaovao fitetezana eo amin'ny sehatry ny famakiana. Misy ny boky izay tsy misy fiandohana sy fiafarana, na ny tena izy, mamela anao hanova ny filaharan'ny famakiana satria mety ho tsara ny fizahana ny pejy teo aloha na ho avy. Ho an'ity, ny Kobo Libra H2O mampiseho amintsika ny fizotry ny fotoana ahafahantsika mivezivezy amin'ny boky, afaka mitsambikina miisa 3 ao amin'ilay boky izahay ary avy eo miverina amin'ny toerana misy antsika. Zavatra tena ilaina amin'ny boky sasany tena tiako.
White, ny loko lamaody ho an'ny eReaders
Ny vaovao Kobo Libra H2O dia azontsika atao amin'ny loko mainty sy fotsy izany, loko iray izay lazain'izy ireo amintsika fa navotana tamin'ny maodely taloha tamin'ny fangatahan'ny besinimaro. Ary tsy voatery ho mainty ny zava-drehetra ... Loko misy fitaovana azontsika atambatra amin'ireo safidy efatra SleepCover, na fonosana vita amin'ny loko mainty, volondavenona, mavokely ary manga aqua (loko lavorary ho an'ny fotsy Kobo Libra H2O).
Boky na lahatsoratra tianao indrindra dia misaotra an'i Pocket
Tianay ny mamaky, fa tsy ny boky ihany ... Miaina eo amin'ny tontolon'ny fanjifana isika, ary mihamaro hatrany ireo bilaogy na haino aman-jery vakiantsika amin'ny andavanandrontsika sy Kobo Libra H2O no fitaovana tonga lafatra handaniana ireo karazana entana ireo.
Misaotra anao fampidirana amin'ny Pocket, tsy mila mamonjy lahatsoratra rehetra hitantsika amin'ny solosainantsika na ny fitaovana finday ao anaty serivisy lisitry ny famakiana malaza fotsiny isika, avy eo dia halefa ho azy ao amin'ny Kobo Libra H2O misy antsika ary ho hitantsika ny kinova iray amin'ilay lahatsoratra tsy misy doka izay manelingelina anay. Izany rehetra izany dia misy tombony amin'ny famakiana omen'ny eReader anay.
Kobo, tranomboky virtoaly izay avy amin'ny tontolon'ny vatana
Araka ny tondroin'ny anarany, ity Kobo Libra H2O ity dia avy amin'ny fianakaviana Kobo, fivarotam-boky an-tserasera izay niandohany tao amin'ny fivarotam-boky ara-batana Kanadiana iza no nahalala ny fomba hanaovana ny tetezamita amin'ny tontolo virtoaly. Hatramin'ny boky 6000 sy audiobook no hitanay ao amin'ny magazay Kobo, tarehimarika mifaninana nefa tsy fantatra izay ananan'ny mpifaninana aminao voalohany satria tsy manome angon-drakitra momba ny isan'ny boky ananany izy ireo.
Ary ny iray amin'ireo zavatra tiako indrindra momba an'i Kobo dia izany manolora ny fahafahan'ny mpanoratra vao manomboka, na tsia ny vao manomboka, hamoaka-tena ny eBooks anao manokana nefa tsy mandalo mpanonta. Modely fandraharahana vaovao izay manamora kokoa ny fanaovana tantara sy fampahafantarana azy ireo.
Vidio ny Kobo Libra H2O vaovao
Azonao atao Raiso ity Kobo Libra H2o vaovao ity amin'ny alàlan'ny mpivarotra lehibe an'ny Rakuten Kobo any Espana, Fnac, na amin'ny tranokala Kobo. Androany dia namidy tamin'ny vidiny 179,99 euros, vidiny iray raha ampitahaintsika amin'ny mpifanitsy aminy (miaraka amin'ny toetra mampiavaka azy) ilay mpivarotra an-tserasera, ny Amazon Kindle Oasis, dia mifaninana tokoa satria ambany ny 70 euro.
Fantatrao ve izao, amporisihinay ve izy io? eny Fitaovana tsara ve ahafahana mamaky ireo boky ankafizintsika na aiza na aiza alehantsika? eny. Raha mitady eReader ianao izay azonao vakiana ao anaty pisinina, eny amoron-dranomasina, eo am-pandriana, na any amin'ny trano fisakafoanana, ny Koko Libra H2O no eReader tonga lafatra.
Ny fonosana fiarovana dia tsy tafiditra ao anatin'ny vidiny
Ny plastika dia mety hijaly amin'ny mety hianjera
Azo hatsaraina ny rindrambaiko
Tsy tantera-drano sy rendrika
Ny bokotra ara-batana dia miverina eo amin'ny tsenan'ny eReader mikasika
Fomba fitetezana vaovao ao amin'ny interface interface
Famerenana ny: Karim Hmeidan
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » Gadgets » eReaders » Kobo Libra H2O, ilay eReader rehetra izay vakinao amin'ny alehanao rehetra
Acer dia manolotra ireo kahie vaovao Chromebook ao amin'ny IFA 2019
Ahoana ny famoahana sary amin'ny horonan-tsary ao amin'ny YouTube